DOWNLOAD CHI! ỌHỤRỤ MBIPUTE - MMEMME NYOCHA - 2019
Ọ dị mkpa ka ndị ọdepịa niile nwee ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị nke arụnyere na kọmpụta iji rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na usoro na ọrụ ahụ. O di nwute, ugbochi na ngwaike di ugbua, ya mere onye ozo gha etinye ya n'onwe ya. A na-eme nke a site na otu ụzọ ise.
Nbudata onye ọkwọ ụgbọala maka HP Photosmart 5510 printer.
Na usoro ịchọta na ntinye abụghị ihe mgbagwoju anya, naanị ị ga-ekpebi nhọrọ kachasị mma. Iji mee nke a, anyị na-atụ aro ka ị jiri nlezianya nyochaa ntụziaka niile dị na isiokwu a, ma mesịa gaa n'ihu ha. Ka anyị leruo ha anya.
Usoro 1: Nchịkọta weebụ weebụ HP
Nke mbụ, ị kwesịrị ị na-ezo aka na saịtị ọrụ nke onye nrụpụta ngwaọrụ, ebe ọ bụ na a na-echekwa ọhụụ ndị ọhụrụ na-echekwa ebe ahụ, ha na-ekesa ha n'efu ma jiri usoro antivirus kwado ha, nke ga-eme ka ntụkwasị obi zuru ezu ma rụọ ọrụ.
N'ime ihe nchọgharị dị mfe, gaa na ibe ụlọ HP na Intaneti.
Leba anya na panel n'elu. Ehọrọ mpaghara "Software na ndị ọkwọ ụgbọala".
Tupu ịmalite, chọpụta ngwaahịa gị. Naanị pịa bọtịnụ nbipute.
Ntughari ohuru ga-emeghe ya na nchọta nyocha. Enwee ihe nlereanya nke onye nbipute gị iji gaa na ibe ahụ na ngwanro ahụ.
Jide n'aka na saịtị ahụ na-egosi na ọ bụ ezigbo usoro nke sistemụ arụmọrụ gị. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, gbanwee aka a.
Ọ na-anọgide na iji gbasaa ngalaba ahụ na onye ọkwọ ụgbọ ala, chọta nsụgharị ọhụrụ ma pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị iji malite ibudata.
A ga-arụ ọrụ ahụ ozugbo ozugbo ị mepee faịlụ ebudatara. Tupu ịmalite, jide n'aka na ejiri kọntaktị ahụ jikọọ na kọmputa ahụ. Mgbe ị kwụsịrị, ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ n'egbughị ọrụ PC.
Usoro nke 2: Mmemme site n'aka onye mmepụta ngwaahịa ahụ
HP na-arụsi ọrụ ike na mmepe nke laptọọpụ, kọmpụta, ndị na-ebi akwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Ha mere ihe kachasị mma ma mee ka ngwanrọ bara uru maka ndị nwe ha chọọ nwelite. Download ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị maka HP Photosmart 5510 site na ngwanrọ a dị ka ndị a:
Dụgharịa ihe nchọgharị weebụ gị wee gaa na saịtị ntanetịaka HP Nkwado, ebe ị nwere ike pịa bọtịnụ ahụ e nyere iji malite nbudata.
Meghee installer download ma pịa ya. "Na-esote".
Gụọ ikikere nkwekọrịta ahụ, kwado ya ma gaa n'ihu nwụnye.
Mgbe ọ gasịrị, gbasaa usoro ihe omume ahụ na n'okpuru edemede "Ngwaọrụ m" pịa bọtịnụ ahụ "Lelee maka mmelite na posts".
Chere ka usoro a mezue. Ị nwere ike ịlele ọganihu ịgụ nyocha site na windo pụrụ iche.
Gaa na ngalaba "Mmelite" na windo ngwa nbipute.
Tinye akà rà ihe ndị dị mkpa ma pịa "Download na Wụnye".
Usoro 3: Nwekọ ndi ọzọ
Ugbu a ọ gaghị esi ike ịchọta ngwanrọ maka nzube ọ bụla na Intanet. Enwekwara ngwanrọ, isi ọrụ nke bụ ntinye nke ndị ọkwọ ụgbọala maka components na peripherals. Ha niile na-arụ ọrụ n'ụzọ dị egwu dị ka otu algọridim ahụ, dịgasị iche na ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ. Gbasawanye na ndị ọkachamara a ma ama nke ngwanrọ dị otú ahụ, gụọ ihe ndị ọzọ anyị nwere.
Otu n'ime ngwọta kachasị mma ga-eji ọkwọ ụgbọala DriverPack. Ọbụna onye ọrụ na-enweghị uche ga-enwe ike ịghọta software a, usoro nhazi agaghị ewe ogologo. Ọ bụrụ na ị kpebie iji DriverPack, gụọ akwụkwọ ntuziaka na isiokwu a na njikọ dị n'okpuru.
Nzọụkwụ 4: Nchịkọta nchịkọta
Enwere ọrụ ntanetị pụrụ iche nke na-enye gị ohere ịchọ na ibudata ndị ọkwọ ụgbọala site na iji njirimara ngwaike pụrụ iche. Dịka, saịtị ndị a bụ faịlụ ziri ezi nke nsụgharị dịgasị iche iche. Ngwa HP Photosmart 5510 pụrụ iche yiri nke a:
Gụ banyere nke a dị iche iche na ihe si n'aka onye ọzọ ederede n'okpuru ebe a. N'ebe ahụ ị ga-ahụ ntụziaka na nkọwa dị mkpa nke ọrụ ndị dị otú ahụ n'ịntanetị.
Usoro 5: Ọrụ OS-arụ ọrụ
Windows sistemụ arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ maka mgbakwunye ngwa, gụnyere ndị na-ebi akwụkwọ. Ọ na-arụ ọrụ site na ntọala melite, ibudata ndepụta nke ngwaahịa ndị dịnụ. Ọ ga-ahụ ihe nlereanya gị ma mee ka echichi. Njikọ dị n'okpuru ebe a nwere ntụziaka nzọụkwụ-site-nzọụkwụ na isiokwu a.
Dịka e kwuru n'elu, usoro ọ bụla chọrọ onye ọrụ iji rụọ ọrụ algorithm kpọmkwem. Ya mere, ị ghaghị ikpebi ụzọ kachasị mma.